AS ROMA VS SPAL: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
AS ROMA VS SPAL: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
Raage December 1, 2017
(Roma) 01 Dis 2017 – Kooxda AS Roma ayaa caawa fiidkii madadaalinaysa kooxda dhowaantan soo dallacday ee Span oo ay kula ciyaarayso hooygeeda Olympico.
Dhanka Roma: Di Francesco ayaa ka samraya Defrel oo jilibka ka dhaawacan iyo De Rossi oo ganaaxan, balse wuxuu xitaa doonayaa inuu nasiyo Nainggolan iyo Perotti. Dhexda waxaa fursad helaya Pellegrini, waxaa sidoo kale ciyaaraya Gonalons, halka weerarka uu ka muuqan doono Schick.
Dhanka Spal: Macallin Semplici waxaa ka ganaaxan Borriello, Viviani iyo Oikonomou (kan dambe waa kayd) balse wuxuu tirsanayaa Salamon iyo Antenucci. Weerarka Paloschi ayaa nalka cagaarani u shidan yahay.
Laacibka Sanadka, tababaraha Sanadka, Kooxda Sanadka…(Real Madrid oo xoog ku heystay abaal marinada Globe Soccer)
SSC NAPOLI VS JUVENTUS: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!